Ankafizo ny Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana | Fianakaviana Sambatra
HAMAKY AMIN'NY TENY Abui Acholi Afrikaans Ahanta Ajië Albaney Alemà Alemà any Pennsylvanie Altaï Alur Amharique Anglisy Arabo Arabo (Maroc) Arabo (Tonizia) Armenianina Asamey Ateso Aukan Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baliney Bambara Baoulé Bashkir Basque Bassa (Cameroun) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Bengali Biak Bichlamar Bicol Boligara Bomu Boulou Bété Catalan Cebuano Changana (Zimbabwe) Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chin (Tiddim) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Cinamwanga Cinghalais Cinyanja Damara Dangme Danoà Dayak Ngaju Digor Diola Douala Drehu Dusun Efik Emberá (Catío) Esan Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frafra Frantsay Féroïen Ga Galicienne Galoà Garifuna Gitonga Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Guna Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Huaxtèque (San Luis Potosi) Iban Ibanag Ibinda Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Irlandey Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Jula Kabarde-Tcherkesse Kabiyè Kabyle Kachin Kalanga (Zimbabwe) Kambôdzianina Kannada Kaomaorianina (Ngazidja) Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisii Kissi Kongo Koreanina Kpelle Kreôla Maorisianina Kreôla any Beliza Kreôla any Guinée-Bissau Kreôla any Haïti Kreôla any La Réunion Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kurde Sorani Kwangali Kwanyama Kyangonde Lamba Laosianina Lenje Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Lugbara Lunda Luo Macua Madura Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mandjak Maninkakan (Atsinanana) Mapudungun Marathe Masedonianina Maya Mayo Mazahua Mazateky (Huautla) Mbukushu Mende Meru Mingrelian Mixe (Afovoany) Mixtèque (Guerrero) Mixtèque (Huajuapan) Mizo Mongol Mooré Motu Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Nambya Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nengone Ngabere Ngangela Nias Niue Norvezianina Nsenga (Zambia) Nyaneka Nyungwe Nzema Népali Odia Oromo Ossète Otetela Otomi (Lohasaha Mezquital) Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Ouïgour (Arabo) Ouïgour (Sirilika) Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Pendjabi (Shahmukhi) Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Pular Páez Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Quiché Rarotonga Romanianina Rosianina Rumanyo Runyankore Rutoro Rômania (Boligaria) Rômania (Gresy Atsimo) Rômania (Gresy Avaratra) Rômania (Macédoine) Rômania (Macédoine) Sirilika Rômania (Slovakia Atsinanana) Samoanina Sangir Sango Saramaccan Sarnami Sena Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Serer Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Shuar Sidama Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Somali Soundanais Sranan Tongo Susu Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Talian Tamoul Tandroy Tankarana Tarahumara Afovoany Tarasque Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Angoley Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Bolivianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Malagasy Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Népali Tenin’ny Tanana Panamianina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Portogey Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Slovaky Tenin’ny Tanana Soedoà Tenin’ny Tanana Tseky Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanana Vietnamianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Ghana Tenin’ny Tanan’ny avy any Goatemalà Tenin’ny Tanan’ny avy any Malawi Tenin’ny Tanan’ny avy any Nouvelle-Zélande Tenin’ny Tanan’ny avy any Taïwan Tenin’ny Tanan’ny avy any Zimbabwe Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Tongan Toraja Totonac Touva Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Turkmène Turkmène (Sirilika) Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Udmurt Umbundu Urhobo Uruund Valencienne Venda Vezo Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wichi Wolaita Wolof Xhosa Xârâcùù Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Édo Éwé
Miaraha Manompo An’i Jehovah
“Mivavaha amin’Ilay nanao ny lanitra sy ny tany.”—Apokalypsy 14:7
Hitantsika tato fa misy toro lalana maro afaka manampy anao sy ny mpianakavinao ao amin’ny Baiboly. Tian’i Jehovah ho sambatra ianao. Mampanantena izy fa hanome izay tena ilainao, raha ataonao loha laharana ny fanompoana azy. (Matio 6:33) Tena tiany ho lasa namany ianao. Ataovy àry izay rehetra azo atao mba hahatonga anao ho naman’Andriamanitra. Izany no voninahitra lehibe indrindra ho an’ny olombelona.—Matio 22:37, 38.
1 HATSARAO NY FIFANDRAISANAO AMIN’I JEHOVAH
INONA NO LAZAIN’NY BAIBOLY? “ ‘Ho rainareo aho, ary ianareo ho zanako lahy sy zanako vavy’, hoy i Jehovah.” (2 Korintianina 6:18) Tian’i Jehovah ho lasa namany akaiky ianao. Anisan’ny manampy anao amin’izany ny vavaka. Mampirisika anao mba ‘tsy hitsahatra hivavaka’ i Jehovah. (1 Tesalonianina 5:17) Tena te hihaino izay eritreretinao lalina sy izay mampanahy anao izy. (Filipianina 4:6) Rehefa miara-mivavaka amin’ny mpianakavinao ianao, dia ho tsapan’izy ireo hoe tena mino ianao fa misy Andriamanitra.
Mila mihaino an’Andriamanitra koa ianao, fa tsy miresaka aminy fotsiny. Manao izany ianao rehefa mianatra ny Teniny sy ireo boky ara-baiboly. (Salamo 1:1, 2) Saintsaino izay ianaranao. (Salamo 77:11, 12) Mila manatrika tsy tapaka an’ireo fivoriana kristianina koa ianao.—Salamo 122:1-4.
Ankoatra izany, dia tena ilainao ny miresaka amin’ny hafa momba an’i Jehovah, raha tianao ny hanatsara ny fifandraisanao aminy. Arakaraka ny iresahanao momba azy no ahatsapanao ho akaiky azy.—Matio 28:19, 20.
Manokàna fotoana hamakiana Baiboly sy hivavahana, isan’andro
Izay zavatra mifandray amin’ny fivavahana no ataovy loha laharana ao an-tokantrano, izay vao ny fialam-boly sy fialan-tsasatra
2 ANKAFIZO NY FOTOAM-PIVAVAHAN’NY FIANAKAVIANAREO
INONA NO LAZAIN’NY BAIBOLY? “Manatòna an’Andriamanitra, dia hanatona anareo izy.” (Jakoba 4:8) Mila manokana fotoana hanaovana Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana tsy tapaka ianareo, ary manaja an’izany fotoana izany. (Genesisy 18:19) Tsy ampy anefa izany. Tadidio foana Andriamanitra amin’izay ataonareo isan’andro. Ampio hifandray kokoa aminy ny mpianakavinao, ka iresaho momba azy “na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha eny an-dalana, na mandry, na mifoha.” (Deoteronomia 6:6, 7) Ataovy tanjonao ny hitovy amin’i Josoa, izay nilaza hoe: “Izaho sy ny ankohonako kosa hanompo an’i Jehovah.”—Josoa 24:15.
Ataovy tsy tapaka ny Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana ary ataovy mifanaraka amin’izay ilain’ny mpianakavy tsirairay
MAHASAMBATRA NY MANOMPO AN’I JEHOVAH
Tsy misy tsara noho ny manompo an’i Jehovah Andriamanitra. Tena faly izy mahita anareo mianakavy manompo azy amin’ny fo. Vao mainka ho tia an’i Jehovah sy hanahaka azy ianareo, rehefa manao izany. (Marka 12:30; Efesianina 5:1) Hihamafy ny fatoram-panambadianareo mivady raha mifandray tsara amin’Andriamanitra ianareo. (Mpitoriteny 4:12; Isaia 48:17) Ho sambatra mandrakizay ianareo mianakavy, satria fantatrareo fa “efa notahin’i Jehovah Andriamanitrareo ianareo.”—Deoteronomia 12:7.
Oviana izahay mivady no niara-nivavaka farany?
Inona no azonay mianakavy iarahana mianatra mba hanatanjaka ny finoanay an’i Jehovah?
HO AN’NY LOHAM-PIANAKAVIANA
Aza avela hisy na inona na inona hisakana anareo tsy hanao ny Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana
Ampahafantaro mialoha an’ireo mpianakavinao ny zavatra hodinihina, mba ho afaka hiomana izy ireo
Ataovy azo antoka hoe eo daholo ny rehetra
Ataovy mahafinaritra ny rehetra ilay izy
Hifankatia kokoa ny fianakavianao sady ho lasa akaiky an’i Jehovah, raha miara-manao fotoam-pivavahana. Fantaro ato izany.